U soo ducee inuu hore ii soo noqdo. ? Ii soo noqo oo soo kabso Partner
U duceeyaa in aan dib u soo noqdo Waxay noqon kartaa badbaadadeenna keliya xilliyadaas xiriirka jacaylka.
Waxaan ka heli karnaa qofkaas inuu dib noogu soo laabto waqti ka yar intii la filaayey oo dhan isagoo odhanaya duco ay dad badani u muuqato mid fudud laakiin aad u xoog badan.
Tukashadan waxaan ka heli karnaa lammaanaheena hore si aan u gaarno khaladaadka uu sameeyay oo aan dib ugu laabano qalbiga baahida u qaba shirkadeena waana waqtigaas aan arki doonno awooda iyo waxtarka ee salaadda laga sameeyay baahida nafta.
1 U duceeyaa in aan dib u soo noqdo
2 U ducee duuggayga in uu ila soo noqdo
3 Salaad awood leh si aad u soo ceshto lamaanahaaga
4 U soo ducee si ninkayga dib loogu soo celiyo
5 Goorma ayaan tukanayaa salaadda ee soo laabashadeyda?
Tani waa mid ka mid ah su'aalaha inta badan la weydiiyo akhristayaashayadu.
Waad iska hubsan kartaa in salaadu ay xoog badan tahay.
Waxaan ku tusi doonaa ugu yaraan 3 ujeedooyin kala duwan. Dhammaantood waxaa tijaabiyey boqollaal qof.
Waxay ku shaqeeyaan qaab fudud, dhakhso badan oo waxtar badan. Kaliya aaminaad rumeeyso oo rumeyso inaad sifiican u socon doonto.
U ducee duuggayga in uu ila soo noqdo
In uu soo noqdo Awoodda SAN CIPRIANO iyo saddexda SOULS ee ilaaliya SAN CIPRIANO, CJCG hadda way iga daba imaan doonaan.
MVBO wuu imaaneyaa isagoo kalgacayl leh, oo jacayl ka buuxo, doonaya inuu ku noqdo oo raali gelin ka bixiyo beenta oo i waydiiyo meheris iyo hadhow arooska sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah.
SAN Cipriano, uu ka illoobayo doonaa in xoog iyo stop mar naag kasta oo laga yaabo in aad madaxa ka dibna u qaadan aniga iyo dhawaaqay for dhan si ay u arkaan.
SAN CIPRIANO wuu ka fogyahay CJCG haweeney kasta, oo isagu mar walba wuu i raadiyaa, TODAY iyo HALKAN, isagoo rajeynaya inuu dhinaceyga joogo, inuu leeyahay SIFIIN AAN UGU BILAAHAY DUMARKA KU SAMEY, in CJCG aysan noolaan karin aniga la'aanteed iyo in CJCG had iyo jeer tahay Hayso muuqaalkayga fikirkaaga mar kasta.
NOW, WITH AAD KA TAHAY, WAA XAGGEE, maxaa yeelay, wuxuu i fikirka waa igu jirtaa.
Markuu sariirta tegayona wuu igu riyoonayaa markii uu soo tooso, wuu iga fikiraa oo wuu i jeclaadaa, markuu wax cunayo wuu iga fikiraa, goortuu igu talaabsada, DHAMMAAN DHAMMAAN NOLOSHADA NOLOSHAADA.
Taasi waxay dooneysaa inay i aragto, dareento urkeyga, waxay igu taabataa LOVE, in CJCG uu doonayo inuu i dhunko, dhunkado, daryeelo, i ilaaliyo, i jeclaado 24ka saacadood maalintii, isagoo sidaas samaynaya, inuu isagu aad u jecel yahay maalin kasta iyo inuu dareemayo farxad kaliya inaan maqlo codkayga
SAN CIPRIANO wuxuu ka dhigayaa CJCG inay ii dareento rabitaan aan caadi ahayn, maadaama uusan weligiis u dareemin mid kale weligiisna dareemi doonin
Inay aniga iga raalli ahaato oo keliya, inay aniga igu habboon tahay oo uu jidhkiisu iska uun leeyahay, inuu nabad qabo oo keliya haddii uu ila wanaagsanaado.
Waxaan kuugu mahadnaqayaa SAN CIPRIANO sidaad u shaqeysay aniga oo ii masruufi doona MAGACAADA adiga oo ku bixin doona sumcadda CJCG waxaanan ku soo qaadan doonaa jacayl, kalgacal, u heellan, u heellan, aamin leh oo damac buuxa ka leh gacmahayga.
Si aan u soo celiyo jacaylkeenna, jacaylkeenna oo ii guursado sida ugu macquulsan ee suuragalka ah.
Waxaan ka codsanayaa in awoodaha seddexda madow ee 'SOULS' madow ee daawadaan ay yihiin CIPRIANO. Aamiin
Ducadaan in ducadii aan la soo laabto ay aad u xoog badan tahay.
Waqtiyada ay jiraan dhibaato xoog leh ee lammaanaheenna, weligeen uma maleyneynno in tani ay tahay dagaalkii ugu dambeeyay, in daqiiqaddaas ka dib nolosheena ay isbeddeleyso maxaa yeelay qofka kale wuxuu go'aansadaa inuu inaga tago sidii wax aan jirin.
Arinta ayaa ah in waqtiyadaas xanaaq aad uxun aynaan inta badan ka fikirno waxaan dhahno isla markaana aan is aragno inaan sameysanno qaladaad badan, kuwaa oo sababi kara in xiriirku xumaado.
Si kastaba ha noqotee, hawshani waxay naga caawin kartaa inaan gaarno wixii aan khaldamay iyo sidii aan wax weyddiin lahayn in lammaanahaas hore u soo celiyo xiriirka, waxa ugu muhiimsan waa in la sameeyo iyada oo la caddeeyo wax walba iyo in salaadda this sidoo kale caawin kartaa.
Salaad awood leh si aad u soo ceshto lamaanahaaga
Sagaal Helena, boqoraddayada qaaliga ah, waxaad ku dhibaatootay dhibaato saddex silsiladood ah, waxaad u soo qaadatay saddex ciddiyo, mid waxaad u keentay wiilkaaga Constantin, mid kale waxaad ka soo qaadatay biyaha badda, inaad caafimaad iyo badbaado siiso kuwa baxraya, hadda adiga Waxaan ka codsanayaa in kooxdan saddexaad ay i siiso, si aan ugu dhejiyo qalbiga iyo maskaxda (qofka aad rabto), si uusan qalbigiisa nabad ugu qabin.
Waxaan ku siinayaa jidhkayga iyo naftayda, (qofka magaciisa) Ii kaalay aniga oo aan wax nagala soocin, carqalad la'aan, inaad adigu jidh ahaan rabto, nafsad ahaan, inaan ku soo laaban doono sharaf dhac, oo aan cagahayga ku dhici doono, oo aan weyddiisan doono fursad aan kula joogo, Saint Elena i caawi.
Saint Elena, nuurkaaga ha noqdo kan i haggaaya mugdigaan xun ee aan dareemayo, si maalin kasta aad u noqoto qof ila socda, oo kalgacayl la imaada sida markii ugu horeysay ee uu i arkay, waxaan kuu qirayaa Saint Elena Jacaylkan, sida eey.
Salaaddaan xoogga leh waxaan u baahanahay inaan helo jacaylka qofkaas, kan i jecel, si uu iigu soo noqdo, oo ah qof awood badan leh, waxaan kaa codsanayaa inaad nagu aragtid sawirka jacaylkaaga, ku dheji jacaylkan horteeda hortooda.
Hadda Santa gacaliye waxaan kuu ballan qaadayaa haddii aad dhinacayga u keento, waan joogsan doonaa (wax aad aad u jeceshahay) muddo toddobaad ah, markaa waad arki kartaa in jacaylka aan dareemayo uu xoog badan yahay, in ku xigeenka, aamintay aad u jeceshahay Santa Elena, aad runtii kuugu aaminay qalbigeyga, waxaan kugu aaminay boqoradda jacaylka, aamintadaada gacaliye, aamin jacaylkeena. ”
U soo ducee salaadda si aad uhesho lammaanahaada caqiido badan.
Soo-kabashada lamaanahaagii hore ayaa ka badan weydiistaada inaad guriga ku soo laabato, waxay ku saabsan tahay soo kabashada dareen kasta oo ereyga ah. Waxaa laga yaabaa in jacaylkii dhintay uu dib u soo laabto xitaa wuu ka xoog badan yahay sidii hore.
Salaad kama sameyn karno isxilqaannimo, rabitaankeenna ah inaan ku tirtirno nafteena qofka kale si aan u yeelno waxaan rabno wax kasta oo aan rabno.
Tani waa Salaad ay tahay in lagu sameeyo qalbiga gacanta ku jirta, marka hore garashada waxa aan nafteena khalad samayney iyo guud ahaanba rabitaanka aan ku weydiisano cafis oo aan dib u dhisno xiriirkii aan hubin laheyn in qofka kale uu dareemayo ama diyaar u yahay inuu sidaas oo kale sameeyo.
U soo ducee si ninkayga dib loogu soo celiyo
Oh Saint Elena ee iskutallaabta, ha iloobin, My Holy, xoog badan oo jacayl ah, waxaan kuugu imid inaan kuu sheego, inaan ku weyddiisto oo aan ku baryo, maadaama ay tahay inaad ogaato in (magaca qofka) uu guriga uga tegey Naag kale, bal ii soo celi.
Santa Elena, ma kula tahay ee dhaawaca waxa uu iga dhigay inaan ka tageen naag kale, waxaan u maleynayaa in qaab a, in uu leeyahay rabitaan, waan jeclahay wadnaha, fadlan dhaqso ugu soo laabanayo, soo jiidaan ii, ka badan abid I illowsiiya, wax alla wixii aan sameeyo, waligaa ha joojin inaad ka fikirto.
Saint Elena oo iskutallaabta ah, jacaylka aan u qabo ninkaas aad buu u weyn yahay, waxaan u siiyay da'yarnimadayda, sannadihii ugu fiicnaa noloshayda, waxaan ahay hooyada carruurtiisa, xanuunka iyo murugada aan haysto waa mid aad u weyn, waa uu iska tagaa Si aan u fududaado markaan imaado sidii wan yar oo qabow oo aan jacaylkayga waydiisto.
Waxaan rajeynayaa ducada inankeyga iyo ninkaygu ku soo noqdaan shaqooyinka.
Guurku waa ballanqaad loo malaynayo inuu u dhexeeya laba qof illaa geerida Kala saar, laakiin tan dambe inta badan lama fuliyo maxaa yeelay waqti kasta oo xiriirku xumaado ayaa sababi kara burburka xiriirka iyo furriinka dambe.
Dhibaatadaani waa mid ku soo kordheysa bulshada dhexdeeda iyo xitaa lammaanaha aaminka ah.
Xaaladahan Tukashadani waxay noqon kartaa mid wax tar leh maxaa yeelay waxay noo oggolaaneysaa inaan soo kabsanno haweeneydaasama aadan rabin in aad sii xiriirka.
Bulsho baraysa in wixii aan waxtar lahayn la tuuro, waa awood inay yeelato qalab si aan ugu ilaalino guurka qaab caafimaad iyo guud ahaan jir ahaan iyo ruux ahaanba ladnaan.
Goorma ayaan tukanayaa salaadda ee soo laabashadeyda?
Salaaddan waa la tukan karaa markasta oo aad rabto.
Waxay leedahay waqti maalin ah ama waqti toddobaadkii.
Muhiimadu waxay tahay in la tukado salaadda si ex-yoow aan ula soo noqdo iyada oo iimaan badnaan leh oo aan aaminsanahay in wax waliba si hagaagsan u socdaan.
Ducada adag ee Santa Muerte si qofka la jecel yahay u soo noqdo
Salaad awood leh si looga saaro isha sharka
Salaad inaad maanta i soo wacdid